Masuuliyiinta Sare Ee Soomaaliya Oo Ammaan U Soo Jeediyey Madaxweynaha Somaliland & Sababta Keentay | Himilo Media Group
Masuuliyiinta Sare Ee Soomaaliya Oo Ammaan U Soo Jeediyey Madaxweynaha Somaliland & Sababta Keentay
Muqdisho, August, 2019 (Himilo)-Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa Madaxweynaha JSL ku ammaanay tallaabadii uu cafiska ugu fidiyey 19kii Maxaabuus ee u dhashay Soomaaliya, iyo sidii Somaliland loogu soo dhaweeyey Odeyadii dhaqanka ee dalkaasi ee lagu wareejiyey Maxaabiistaasi.
Raysul wasaare ku xigeenka dalkaasi Soomaaliya ayaa shalay kulan uu xafiiskiisa kula yeeshay warbixin kaga dhegaystay Odayaashii dhaqanka ee dhawaan Hargeysa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Ugu horreyna, Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo hoggaaminayey Odayaashii dhaqanka ee Madaxweynaha Somaliland kala soo wareegay 19-kii Maxbuus ee cafiska uu u fidiyey ayaa Raysul Wasaare ku-xigeenka uga war bixiyey sidii Soomaalinimada, xushmadda iyo qadarinta laheyd ee loo soo dhaweeyey.
Intaasi kadibna, Raysul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa Madaweynaha Somaliland ku ammaanay soo dhaweynta Soomaalinimada leh ee uu ku qaabilay Odayaasha gobalka Banaadir.
Raysul Wasaare ku-xigeenka ayaa sidoo kale odyaasha dhaqanka uga mahad celiyay gacanta ay ka geysteen in mawaadiniinta Soomaaliyeed ay xorriyaddooda dib u helaan, waxaanu ku dhiirrigeliyay in ay sii wadaan doorka ballaadhan ee dhaqanku ku leeyahay bulshada dhexdeeda.
Haddaba, Intii kulanku uu socday ayaa Odayaashu waxa ay codsadeen in la soo daayo oo iyana cafis loo fidiyo mawaadiniin kale oo dhallinyaradan ay isku xukun ahaayeen oo ku xidhan Maamul Gobolleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo waliba Xabsiga dhexe ee dalkaasi Soomaaliya.